धुर्मुस सुन्तली साँझ मार्फत १४ लाख, सिटी एक्स्प्रेशद्वारा थप १५ लाख | suryakhabar.com
Home आर्थिक धुर्मुस सुन्तली साँझ मार्फत १४ लाख, सिटी एक्स्प्रेशद्वारा थप १५ लाख
काठमाडौं । रेमिट्यान्स सेवा प्रदायक कम्पनी सिटी एक्स्प्रेस मनी ट्रान्सफरले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई सहयोग राशी स्वरुप रु २९ लाख हस्तान्तरण गरेको छ । सिटी एक्सप्रेसद्वारा जापानको नाकानो जिरो हलमा आयोजित ‘धुर्मुस सुन्तली साँझ’ कार्यक्रमका दौरान धुर्मुस सुन्तली अर्थात् लोकप्रिय हाँस्य कलाकार तथा समाजसेवी सिताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरेलाई सो रकम हस्तान्तरण गरिएको हो । कम्पनीका तर्फबाट सिटी एक्स्प्रेसका अध्यक्ष महेश कुुुमार श्रेष्ठले कलाकारद्वयलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
च्यारिटी कार्यक्रमका रुपमा आयोजित धुर्मुस सुन्तली साँझमा उपस्थित दर्शकहरुबाट रु. १४ लाख संकलन भएको जानकारी दिइएको छ । यसरी संकलित रु. १४ लाखमा सिटी एक्स्प्रेशले थप रु १५ लाख थपेर धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेशनलाई एक मुस्ट नगद रु २९ लाख प्रदान गरेको हो । धुर्मुस सन्तली फाउन्डेशन भुकम्प पिडितहरुको राहतका लागि बासस्थान निर्माण लगायत कार्यमा सक्रिय भएर लागि परेको संस्था हो । संस्था मार्फत थप पिडितलाई राहत प्रदान गर्न सघाउने सोचका साथ उक्त रकम हस्तान्तरण गरिएको सिटी एक्सप्रेसले जानकारी दिएको छ ।
कार्यक्रम स्थलमा सिटी एक्स्प्रेशद्वारा लक्की ड्र कार्यक्रमको आयोजनापनि गरिएको थियो । लक्की ड्र मार्फत छनोटमा परेका ३० जना भाग्यशाली विजेताहरुलाई कम्पनीका तर्फबाट १२ पटक सम्म नेपालमा पैसा पठाउन निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । गोलाप्रथा मार्फतै सिटी ट्राभल एण्ड सिटी एक्सप्रेसको तर्फबाट एक जना भाग्यशाली विजेतालाई नेपाल जाने र आउने दूईतर्फी टिकट प्रदान गरिएको छ । विजेता छनोट भएका रमेश केसीले सो टिकट हात पारेका छन् । उनले नेपाल जाने आउने दुइतर्फी हवाई टिकट जितेका छन् । विजेता केसीलाई सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) , सिटी एक्सपे्रस जापान का अध्यक्ष महेश कुुुमार श्रेष्ठ तथा सिटी ट्राभलका म्यानेजर दिनेश केसीले संयुक्त रुपमा पुरस्कार हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
अनुषा राई बनिन् ‘मिस एसईई आइडल २०१७’ को बिजेता
ललितपुरमा हालसम्म काँग्रेसका चिरिबाबु नै अग्रस्थानमा
७ जेष्ठ २०७४, आईतवार १०:०६